Ndijonge kuba iimposiso kwaye intuitive perception yomntu, enokuphunyezwa ngaphandle touching iingxaki ka-survival, ingxowa-oneself. Ndiyazi yakhe uphawu, lakhe enokwenzeka, kwaye iinjongo zakhe. Unabo explored kwezo meko kwaye iinjongo. Xa zethu potentials kwaye iinjongo ingaba efanayo, kuyinto ebalulekileyo resonance. Thina chonga phezulu subtle vibrations. Kanye kanye, umntu, le intuitive-iimposiso uhlobo. Ufuna ukusa kwi, ifuna ngaphezulu ubomi, ukholwayo elizwini imimangaliso. Eqhelekileyo usapho ubomi akuthethi ukuba mba, ke phezu. Ndijonge kuba reliable iqabane lakho, ngubani conscious, honest, boundless, inflating subtle vibrations kwaye favorable iimeko kuba capturing subtle vibrations. I-obungunaphakade lwabafundi kunye namashumi anesithandathu unyaka-ubudala, – a no-b. Dancing, fashion, fitness, concerts, esebenzayo iziganeko, ngokukhawuleza amaqela ezaphuli-mthetho ka-yonke into enika umdla, esebenzayo, cheerful. Ndibathanda ukuze bonwabele ubomi, umdaniso, benze okulungileyo, uncedo kwaye bona smiles kwezinye abantu ke ajongene, mna uthando adventures kwaye ukuhamba, cruises kwaye iincoko, mna Mna uthando lwabo abahlobo, mna uthando ezincinane abantwana nezilwanyana. Uthando, passion, ubuhle-ngu-bam credo. Ndiphila kwi-North Carolina e kwayo indlu. Bonke ubomi bam ndine waphila, lezinto ezinako ukwenzeka, lubandakanya kwaye isebenza kwi-Ngcwele Marengo. I-ileta-igazi nationality: umama Bamayuda, uyise Isijapani.
Ndiya kukhokela igqiza isempilweni ukuzonwabisa: mna cook ilungelo dishes, qeqesho. Wam pros: balanced, inqwelo bag, mnandi umntu, polite. Ubhala ngawe kanjalo ndithi: umyalelo amazinyo, iingxaki kunye isixhosa ulwimi, insomnia. Mna nento yokuba ufuna kulala ezahlukeneyo beds ukuba ufuna thatha kuhamba kunye. Ndijonge kuba indoda kuba ezinzima elide budlelwane. Umntu ngubani owaziyo ntoni yena ufuna ngaphandle ubomi.
Decent, okulungileyo, ebukekayo
Ndinqwenela ukufumana ezinzima umntu kunye nomdla uphawu, mna-uqinisekile, nako ukuncoma, intlonipho kwaye uthando umfazi. Oko unako jika i-nokuqheleka umhla kwi-iholide? Ukuze benze ubulungisa ukuba yintoni ekhethekileyo malunga umntu, ndifuna ukwenza kubudlelwane apho siya siyaqonda ngamnye ezinye ngonaphakade ngaphandle mazwi. Wamkelekile Dating site kuba abafazi kwi-USA. Apha uyakwazi imboniselo profiles yabasetyhini ukusuka zonke phezu kweli lizwe kuba free ngaphandle nokubhalisa. Kodwa emva kokuba ubhaliso, uza kuba ukufikelela unxibelelwano kunye nabafazi girls hayi kuphela e-UNITED STATES, kodwa kanjalo kwamanye amazwe ehlabathini. Ukuba ufuna ukuya kuhlangana, fumana uthando, yenza entsha acquaintances, ukufumana abahlobo, ngoko ke yesibini isiqingatha, bethu Dating site ulindele kuba kuni
← Dating zephondo: Dating kwi-Brazil
Isiphuthukezi kwi-Skype - Funda isiphuthukezi kwi-Skype, amaxabiso nangenkuthalo iingxelo →